UDaphne du Maurier. Iiklasikhi zakhe ezintathu ezibalulekileyo. | Uncwadi lwangoku
UDaphne du Maurier. Iiklasikhi zakhe ezintathu ezibalulekileyo.
Iklasikhi sikaDaphne du Maurier
Umbhali wase-Bhritane UDaphne du Maurier (Ngo-1907-1989) wayeyinzala yentsapho ebaluleke kakhulu yababhali kunye namagcisa, eqala ngabazali bakhe, abadlali beqonga uGerald du Maurier noMuriel Beaumont. Ke imeko yenkcubeko ukumngqonga akunakuba ngaphezulu ezintle Ukuphuhlisa ikhondo lomsebenzi ojolise kuncwadi kwasebusheni bakhe. Ekuhambeni kwexesha ibe yenye ye amanenekazi amakhulu eencwadi zase-Bhritane zenkulungwane yama-XNUMX.
Uninzi lweenoveli zakhe lwaluyimpumelelo engenakuphikiswa, ngaphandle kokugxekwa okungathandekiyo. Ezi ntsuku zikulungele ukukhumbula okanye ukusondela kwi-yakho amabali okurhanela, ukuthandabuza, ukuthandana kunye nemfihlakalo. Eminye yemisebenzi yakhe edumileyo yile, ngokuqinisekileyo sonke siyifundile okanye sayibona kulungelelwaniso lwefilimu.
UDaphne du Maurier wayefunde eNgilane naseParis kwaye yaqala njengombhali kwi1928. Uyenzile ngokubonisa italente enkulu ngamayelenqe, inoveli yothando lwe-gothic kunye nemfihlakalo. Uhlala ebonakalisa okukhulu ukunconywa kunye nefuthe loodade baseBrönteLe mpembelelo ibonakala ngokucacileyo emsebenzini wakhe.
Ngaphandle kweenoveli, uDu Maurier naye wabhala amabali, imidlalo yeqonga kunye neentsomi. Kwaye wafumana amabhaso kunye nokunakanwa okunje Ibhaso leNcwadi leSizwe eUnited States nase Umyalelo woBukhosi baseBritane. Nangona kunjalo, izihloko zakhe ezidumileyo kunye nezendalo zonke zezi.
1 IJamaica Inn (1937)
2 URebecca (1938)
3 Iintaka (1962)
4 Kutheni ufunda uDu Maurier
Indawo yaseJamaica (1937)
Libali le UMary yellan ukuba, emva kokusweleka kwabazali babo, uza kuhlala noomalume bakhe, kubenzima ukuba ungamazi. Umalume wakhe ungumnini La posada de Jamaica eCornwall. Ukufika kukaMary, ujongene nenyani ebuhlungu. Umalume wakhe linxila eliphethe kakubi umakazi wakhe kwaye indlu yabahambi umqolomba obanzi apho abathengi bomhlambi obubi kakhulu: abanxila, abashushumbisi nabaphuli-mthetho.
UMary uqala ukukrokrela ukuba umalume wakhe unayo ishishini elinamafu Ezandleni. Ukujika kuvela UJem merlyn, Igosa lomkhosi wamanzi eliphanda ukuba ngubani ongasemva Ukophuka komkhumbi ngokuqhubekayo Iinqanawa ezibiwe ngempahla. Imibuzo yakhe iza kubeka ubomi bakhe emngciphekweni kungekudala. NguMariya kuphela oya kumnceda.
Ngaba ifayile ye- inoveli yokuqala UDu Maurier kwaye waba yimpumelelo enkulu. Ibi Umxholo wolungelelwaniso oluninzi kwifilimu nakwimidlalo kamabonakude ulwamkelo olufanayo ngabafundi kunye noluntu ngokubanzi. Kodwa ngokungathandabuzekiyo eyona idumileyo yayinolwalathiso lwe UAlfred Hitchcock, Uyazivuma ngokwakho uDu Maurier. Ayizukuphela kwexesha lokuba umlawuli odumileyo wase-Bhritane alungelelanise enye yemisebenzi yakhe. Ithembekile umlingisi ongaqhelekanga ekhokelwa nguCharles Laughton, uRobert Newton okanye uMaureen O'Hara kwindima yabo yokuqala. Yakhululwa ngo-1939.
UDu Maurier kunokwenzeka ukuba wafikelela ukungafi koncwadi nge Rebecca (Ngo-1938), isihloko awasitshintsha kwakhona Hitchcock ukuyenza nayo ingafi kwi-cinema. Kwaye mhlekazi ULaurence Olivier, uJoan Fontaine kunye noJudith Anderson ongalibalekiyo Babengobona buso babalaseleyo ababenokuba nguMnu. Maxim de Winter, owesibini uNkosikazi de Winter kunye nombalisi webali, kunye noNkosazana Danvers, umgcini wendlu okhohlakeleyo wendlu yaseManderley, ephethwe nguMnu de Winter.
Ngexesha lokuhlala eMonte Carlo umlinganiswa ophambili udibana noMaxim de WinterUmtsalane, umhlolokazi owayengumhlolokazi owafelwa ngumfazi phantsi kweemeko ezingaqhelekanga. Uthandana naye, othe nangona emdala kakhulu, wamcela. Batshata ngaphandle kokwazana kwaye bahamba bayohlala eManderley.
Kodwa kukho lphambi kongasekhoyo uRebecca (Umfazi wokuqala kaMaxim) ubudlelwane phakathi kwamaqabane buqala ukonakala. Umncinci kwaye akazithembanga u-Nkosikazi de Winter wesibini uziva rhoqo xa kuthelekiswa noRebecca, ngakumbi nguNkskz Danvers, ocinga ukuba umngeneleli kwaye amenze angakwazi ukuphila.
Ukurhoxiswa, ukuthandana, idrama yengqondo, isenzo kunye neqhinga ngokulingana Ziyahlangana ukuze zibambe umfundi kwaye ngokuqinisekileyo ziyicinephile.
Ibali elifutshane elinokuphela ngesiquphe Ukuba uDu Maurier wakwazi ukushiya ngenxa yokucinga komfundi, eli bali loyikisayo lafakwa kwi-retina yomntu wonke ngenxa yobugcisa bemiboniso bhanyabhanya obaphinda basayina uHitchcock. Kunye UTippi Hedren kunye no-Australia u-Rod Taylor njengabalinganiswa abaphambili.
Isiteyitimenti sombuzo: Sinokwenza ntoni ukuba ngenye imini ezo zidalwa zibonakala zingenabungozi iintaka batshintshe indlela abaziphethe ngayo ngaphandle kwesizathu baqale bahlasele abantu? Ewe, nazi zonke, ezincinci, eziphakathi okanye ezinkulu, ziyabulala. Umlinganiswa ophambili webali uzakuzama ukusindisa usapho lwakhe, azikhusele kangangoko anakho kuhlaselo lwamawaka eentaka ezifika zivela kuyo yonke indawo.
Ukuphumla, ukuphazamiseka kunye noxinzelelo ngaphambi kwento engenakuqondakala ifikelela kwiindawo eziphakamileyo ezingenakoyiswa ukuba inkosi yase-Bhritane yokurhanela kunye noloyiko ikwazi ukubonisa ngokuchanekileyo.
Kutheni ufunda uDu Maurier
Ukwenzela i izala kwaye yahlukile iinoveli zakhe, ukuba bakholisa ngokulinganayo kubathandi beentlobo ezinjengothando, uloyiko, imfihlakalo okanye intsomi. Ufumana ulwazi ngakumbi malunga nalo mbhali apha (Kwaye ngendlela, uqhubeka nokuziqhelanisa nesiNgesi).
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli » UDaphne du Maurier. Iiklasikhi zakhe ezintathu ezibalulekileyo.
Ay Mariola, andazi ukuba uyenza njani kodwa indenza ndifune ukufunda yonke into oyithethayo, uluhlu lwezinto endizakuzenza ziyaqhubeka zityeba 😉
Kodwa ngokuqinisekileyo uzibonile iimovie. Akukho nto, ngakumbi kuluhlu lwakho.